abanikazi abaningi we MacBook azisetshenziswa ukuba banake ukungcoliswa yabo kungenzeka by computer amagciwane, nakuba amathuba lokhu ukuba mikhulu. Kuphela ingxenye encane Macintosh abasebenzisi computer bayabakhathalela ngempela umbuzo ngabe-anti-virus on a Mac kudingeka, ngenxa ngokuqiniseka ukuthi izigebengu akuvamile banake lokhu yesistimu yokusebenza, sibheke endaweni Windows kakhulu ethandwa kakhudlwana. Phela, iphesenti elincane nje labantu zisebenzisa ukuzijabulisa futhi MacBook.
Kodwa lokhu akusho ukuthi usongo hacker kokululama-Mac OS. Ngezikhathi, zikhona ezinye izinkinga, ngakho akukho langempela futhi ngempumelelo anti-virus ongakwazi ukuzenza. Akuwona wonke-anti-virus ye-Mac uzokwazi enokwethenjelwa futhi icubungulisise ukuvikela ukutheleleka nge-malware. Indlela ukukhethwa iseluleko kumele isekelwe inhloso i-computer isetshenziswa. Landelela antivirus simo kufanele kube njalo.
Le unqulo wesi arab ubhekwa enamandla kakhulu, ngoba kalula nje ukuthola uvimbe yonke imibuthano ukuhlaselwa ezivamile. Lolu hlelo lusebenzisa nokwethenjelwa efakazelwe of ubuchule Ukuvikelwa obonwa izinkampani owaziwa wokuhlola ohleliwe, ICSA Labs, TUV, Virus Bulletin futhi Checkvir.
Antivirus for Mac Bitdefender liyasetshenziswa ukuthola umkhondo umsebenzi spyware. It ikuvumela ukuba:
Nikeza isivikelo ngokumelene computer virus futhi spyware ngesikhathi sangempela.
Vimbela amagciwane ezingaziwa ngisho ngenkathi usebenzisa mathupha ukuthola ubuchwepheshe.
ivale ngokuzenzakalelayo phansi amathuluzi ukuphatha kwamarimothi (okubizwa ngokuthi "rootkits");
Njalo ngehora ukubuyekeza igciwane egciniwe nge uxhumano lwe-Inthanethi.
Nomphumela okuncane kanye cishe akukho umthwalo yesistimu yokusebenza.
Umsebenzi obaluleke kunayo yonke Bitdefender Antivirus yikhono kwekhompyutha ukuvikela okugqokile ophathe. Kuyinto kanje:
Control wavakashela amasayithi.
• Ukunciphisa okuphawulekayo ingozi imininingwane ebucayi ukuthola kumnikazi ikhompyutha ezandleni izigebengu (amaphasiwedi, imininingwane yokuxhumana, imininingwane yekhadi lesikweletu nokunye. D.).
Le unqulo wesi arab ye-Mac uyagijima abathandwa abasebenzisi eziningi isikimu "setha futhi akhohlwe". Futhi ikhono ubuyekeze ngokuzenzakalela uma wena uphume Inthanethi kufanele iphakamise lolu hlelo omunye the best ukuvikela i-Mac OS.
Umthelela lolu hlelo anti-virus kuhloswe ngokuyinhloko at ekutholeni futhi zokuyithena igciwane ngesinyenyela singene computer. I search wenziwa hhayi kuphela kwi disk hard of umshini, kodwa futhi inkumbulo yayo, ukuqalisa imikhakha, izincwadi wathola nge-imeyili. Kulokhu, amabhlogo izikripthi osolisayo. Virus egciniwe njalo olusha futhi ingalandwa nge-Internet.
Avast enembile, ngoba has a esibonakalayo elula shoka izikhumba ezahlukene. isofthiwe Iyatholakala njengendlela khulula Mac-anti-virus (inguqulo Ikhaya Edition ye ukusebenzisa kwangasese) kanye ukuhlela kabusha professional eklanyelwe ukuvikela computer izinkampani namabhizinisi (Inguqulo Professional Edition).
Kaspersky Anti Virus ubhekwa ikhambi ehlangene lenkinga amagciwane ohlelweni ezisebenza Mac. Uyakwazi ukuvikela ikhompyutha yakho ngokumelene zonke izingozi ezingaba khona futhi aqinisekise ukuphepha kwezingane ezihlukunyeziwe kuthengiselana ngalinye kokuba uzibophezele ku-intanethi.
Lapho edala lolu hlelo ukusebenzisa ubuchwepheshe bamuva, ukuthembeka neshaya kahle kule zizivikele Trojans, amagciwane, ama-bot, nokunye. D. Kusukela heuristics eziphambili angikwazi ukubalekela ngisho izinhlelo igciwane elaziwayo elincane, abaqashelwa ukuziphatha ezithile yesistimu yokusebenza.
Anti Virus-Mac OS Kaspersky Internet Security unikeza izici ezilandelayo:
khona njalo zamanje izinhlelo ezinonya egciniwe njalo olusha isevisi ifu Kaspersky Security Network.
Okuthuthukisiwe ubuchwepheshe anti-bokweba imininingwane ebucayi.
Ukuba khona kwe-module exhumanisa umnikazi idatha ku idumela website ngamunye. Ulwazi uboniswa ku ukukhanya ekhethekile, etholakala eduze izixhumanisi izinjini iziphequluli athandwayo.
Ikhibhodi ebonakalayo evumela ukwethulwa idatha ebucayi, okuyinto kubalulekile ikakhulu lapho ukwenza imisebenzi yezimali-intanethi.
EBukhoneni control sabazali module, ngawo ungasetha mngcele okukhiphayo-Internet, yenza uhlu izingosi ezingafanele ukuvakashela, qapha futhi ukhawule izincwadi in ukuxhumana nomphakathi, ukuqapha amafayela thwebula.
ukusebenza okuphezulu nge eliphansi kakhulu CPU umthwalo, esingeqile 1% kwemithombo.
Cishe lena yiyona unqulo wesi arab kangcono Mac, okuvumela ngaphandle kokufaka Dr.Web ngokushesha scan zokukhipha igciwane computer ngempumelelo. Loluhlelo olusha kabili ihora kuya enguqulweni yakamuva database igciwane.
Ingasetshenziselwa lokufeza ukuhlonza nokususwa:
kufayela amagciwane Trojans;
polymorphic, ehlukaniswe nemizimba amagciwane isofthiwe;
ngobuqili, amagciwane Macro;
amagciwane zokuthelela imibhalo MS Office;
isofthiwe ezahlukene spyware;
okokudayela nezinhlelo ukuthi ukuntshontsha amaphasiwedi;
Spyware, adware futhi yingozi yekhompyutha yakho nedatha elondolozwe ngaphandle kwe-software;
izinhlelo ihlaya, kanye nezinhlelo-imbobo;
izikripthi ezinonya nezinye amakhodi, okubeka engcupheni.
Le unqulo wesi arab khulula ye-Mac is ngokuyinhloko yenzelwa ukuthola futhi uhlole amafayela ezisolisayo ngoba khona amagciwane nezinye ikhodi enonya. Ngalolu hlelo umsebenzisi ingathunyelwa ifayela okwakubonakala kuwukuphikisana osolisayo kusukela MacBook yakho iseva, lapho uzobe ihlolwe amahlanu imikhiqizo ehlukene unqulo wesi arab. Kunomkhawulo usayizi wefayela - akukho ngaphezu kuka-50 MB.
Emva scan, unqulo wesi arab sizonikeza umsebenzisi ngolwazi mayelana nenani amagciwane itholiwe, futhi ibonisa kutjhiwo VirusTotal inkonzo iwebhusayithi ukuthola ulwazi oluthe xaxa imiphumela yokuhlolwa kwamabhuku.
Norton Unqulo wesi arab
Lokhu-anti-virus Uhlelo ethandwa ngezinga elithile ezinhlanu Ukuvikelwa, lapho ungakwazi ngokushesha futhi nge ukusebenza kahle eliphezulu ukuthola iwukudambisa spyware. Injongo eyinhloko Norton Unqulo wesi arab - ukunikeza umnikazi MacBook operation ephephile futhi exchange of idatha ku-intanethi.
The main izici zayo zohlelo zihlanganisa:
Ukutholakala neutralization of nobungozi, okuyinto ikuvumela ukuba ukuhlonza ngokushesha futhi asuse virus ezifihliwe, okunzima kakhulu ukususa.
Imisuka zokuqapha iwashi futhi isebenzisa Sonar kubuchwepheshe ulandela yonke ukuthengiselana osolisayo kukhompyutha, ngokushesha ukukhomba zonke nobungozi.
Ukuvikelwa ezinsongweni ezivela inethiwekhi ngaphandle ukwehla kancane ekusebenzeni uhlelo.
Iskena wemukele i-imeyili futhi bethumelelana imiyalezo ngokushesha eze beyofuna nezinamathiselo osolisayo, kanye nezixhumanisi izinsiza zama-third party.
Ukunqunywa amafayela ephephile futhi kuphela scan egcwele engaziwa noma osolisayo, ngenxa okuyinto kukhona nokwanda okuphawulekayo ukusebenza uhlelo.
Vimbela ukulanda isofthiwe yingozi futhi izingxenye zalo kwikhompyutha ngaphandle kolwazi lomnikazi.
Implementation ukuhlonza nokuvikelwa onokwethenjelwa idatha yomsebenzisi eyimfihlo.
Hlola idumela amawebhusayithi kanye definition sokuphepha okokufaka kubo nganoma imiphi imininingwane yomuntu.
Ilungiselelo zokuxhumana ephephile social, bethenga inthanethi kanye namanye amasayithi.
Amandla ubuyekeze ngokuzenzakalelayo ngaphandle iqhaza umnikazi.
Ukutholakala ezikhethekile izicelo ifu ukulawula elula umsebenzi antivirus Norton Management.
Isilinganiselwa Antiviruses ayikwazi kubhekwe ephelele ngaphandle kobukhona kuwo kwenye brainchild of Kaspersky Labs, bakwazi ukuvikela idatha ngangokunokwenzeka. Anti ihlala ihlola amafayela alandwe kusuka Inethiwekhi yomhlabajikelele yama-e-mail okunamathiselwe, iqinisekisa neutralization malware ngaphambi kokuba afike MacBook.
Kaspersky Anti Virus uqhuba ngokujulile scan kohlelo ngenhloso yokuthola nokususa amafayela ezinonya.
Ukusebenzisa software enikeziwe:
isivikelo izimpethu, Trojans namagciwane imikhiqizo;
isivikelo ngokumelene adware kanye spyware;
kuhlolwa amafayela Popular inthanethi, imeyili engenayo, traffic Inthanethi ngesikhathi sangempela;
Ukuvikelwa amagciwane uma usebenzisa imiyalezo esheshayo;
Ukuvikelwa keyloggers yiluphi uhlobo;
Ukuthola futhi uvimbele rootkits;
buyekeza ngokuzenzekelayo igciwane izincazelo.
ProtectMac Unqulo wesi arab
Le unqulo wesi arab-Mac OS X likhona simo ngenxa amathuba okuthola i-malware futhi Trojans hhayi kuphela kwi-computer, kodwa futhi kunethiwekhi imithombo.
Uhlelo njengoba "lihlala" kwimemori futhi vigilantly uqaphe zonke izinqubo kanye nemisebenzi aphethwe phezu MacBook, Lapho igciwane ithelela ikhompyutha, wayihlukumeza kakhulu masinyane ke ivinjiwe, kanye uhlelo azisa umsebenzisi.
Lena ngenye yama-isithwebuli engcono ukuthi kuthola amagciwane. Uhlelo kuthola, ngisho Trojans beziguqula umculo namafayela esithombe, ividiyo noma ifolda. Izandiso ihlolwe amafayela kungenziwa isethwe ngesandla ngumsebenzisi.
Lokhu-anti-virus aqalaze idrayivu kanzima trojans, amagciwane kanye malware elibukeka drive ngamunye ifolda ngalinye kanye ifayela. Kungenzeka futhi ukuba ngamunye hlola element ngayinye, umsebenzisi okubonakala osolisayo. Futhi, ungakwazi Ukusetha isikhathi scan okuzenzakalelayo, okwathi ngemva kwalokho kuzonikezwa ngolwazi enemininingwane ekhombisa izinkinga itholiwe.
Ukusebenzisa uhlelo oshiwo ngenhla ungaqiniseka ngokugcwele Ukuvikelwa onokwethenjelwa MacBook. Isiphi isivikeli magciwane ukukhetha ye-Mac, incike izici zedivayisi futhi imisebenzi eyabelwe yona. Naphezu ukuthandwa eliphansi le-operating system kubaduni, Ukuvikelwa oludingekayo ukuze isetshenziswe ngempumelelo MacBook ngaphandle ingozi yokutheleleka futhi okwalandela isevisi yokuthola inkinga izikhungo noma bebodwa.
Ubhontshisi kanye nemifino. Ubhontshisi Red nge Imifino: Ungadliwa
Isichuse ethayeleni ekhishini: ukhethe futhi uthenge ilungelo